As of Mon, 06 Jul, 2020 23:25
बुधवार, फाल्गुन ३०, २०७४
बाँकेमा २१ प्रतिशत पुँजीगत खर्च
बाँकेका आठवटै स्थानीय तहले चालू आवको ८ महिनामा वार्षिक बजेटको २१.६३ प्रतिशत रकम मात्र खर्च गरेका छन् । चालू आर्थिक बर्षको माघ मसान्तसम्म बाँकेमा केन्द्रीय अनुदानतर्फ वार्षिक बजेटको २१.६३ प्रतिशत रकम मात्र खर्च गरेको देखिएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । सो कार्यालयका अनुसार दोस्रो चौमासिकका लागि निकासा भएको ३२.५३ प्रतिशत मात्र विकास बजेट खर्च भएको छ ।
भोलिबाट गण्डकीमा १६४६ सवारी साधन विस्तापित
आगामी चैत १ गते अर्थात् बिहीबारदेखि २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारी साधनहरू सञ्चालन नहुने भएका छन् । वातावरण प्रदूषण गराएको भन्दै नेपाल सरकारले ०७४ चैत १ गतेबाट २० वर्ष पुराना भाडाका सवारी साधनलाई चल्न नदिने तयारी भएको हो ।
आर्थिक समृद्धिका लागि प्रदेशहरूबीच प्रतिस्पर्धा आवश्यक : विनोद चौधरी
उद्योगपति तथा नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीले आर्थिक समृद्धिका लागि प्रदेशहरूका बीचमा सकारात्मक प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने बताएका छन् । आर्थिक एवं सामाजिक विकासका लागि मुलुकमा संघीय संरचना कार्यान्वयन गरिएको बताउँदै उनले प्रदेश सरकारहरूले यही सोचका साथ काम सुरु गर्न आग्रह गरेका छन् ।
प्रसारण लाइन नहुँदा विद्युत् खेर
सिंगटी–लामोसाँघु प्रसारण लाइन २ वर्षमा पूरा गर्ने गरी ८ वर्ष अघि ठेक्का सम्झौता भयो । तर आयोजना ८ वर्ष पूरा हुँदासम्म अलपत्र छ । प्रसारण लाइन नबन्दा सिप्रिङ खोलालगायतको बिजुली खेर गइरहेको छ भने लगानीकर्ताले ५ वर्षदेखि करोडौं वार्षिक घाटा बेहोर्दै आउनु परेको छ । सिंगटी–लामोसाँघु प्रसारण लाइन १३२ केभी क्षमताको हो । ठेकेदारको लापरबाही र सरकारको बेवास्ताले अहिलेसम्म निर्माण अलपत्र छ । प्रसारण लाइन निर्माणको जिम्मा पाएको भारतीय कम्पनी अरावली इन्फ्रा पावरले आर्थिक संकट देखाउँदै काममा ढिलाइ गर्दै आएको छ । तर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दबाव दिएर काम गराउन सकेको छैन । सुरुमा ठेक्का सम्झौता भएको मितिले २ वर्षभित्र निर्माण पूरा गर्ने शर्त थियो । तर, ८ वर्ष बितिसक्यो । अझै प्रसारण लाइन कहिले पूरा हुन्छ भन्ने टुंगो छैन । ठेकेदारसँग प्राधिकरणले ४ पटक सम्झौता नवीकरण गरेको छ । चौथो पटक थपिएको समयअनुसार २०७५ जेठमा काम पूरा हुँदै छ । तर, उक्त समयमा पनि प्रसारण लाइन पूरा हुने संकेत देखिएको छैन । २०६७ सालबाट निर्माण थालिएको प्रसारण लाइन सुरुका २ वर्ष तीव्र गतिमा अघि बढेको थियो । २०६९ देखि २०७३ चैतसम्म आर्थिक संकटको कारण देखाउँदै ठेकेदारले पूर्ण रूपमा निर्माण रोक्यो । यसबीचमा प्राधिकरणले ठेक्का सम्झौता तोडेर नयाँ ठेकेदार नियुक्त गर्ने तयारी थालेको थियो । नयाँ ठेक्कामा जाँदा लामो समय लाग्ने हुँदा थप ढिलो हुने कारण देखाउँदै त्यस क्षेत्रमा जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने निजी प्रवद्र्धकले पुरानै ठेक्कालाई निरन्तरता दिन आग्रह गरेका थिए । प्राधिकरण, निजी क्षेत्र र ठेकेदारबीच भएको समझदारी अनुसार गत वैशाखबाट ठेकेदारले प्रसारण लाइन निर्माणको काम पुनः सुचारु गरेको छ, त्यो पनि अरावलीको नेपाली एजेन्ट बनेर मार्बुमा निर्माणाधीन ४० मेगावाटको खानी खोला–१ जलविद्युत आयोजनाका प्रवद्र्धकहरूबाटै । उनीहरु आफैंले गरेको काम पनि सुस्त छ । ठेकेदारले निर्माण रोकेको समयमा जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरणलगायत काम भने नरोकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । निर्माणको प्रगति सिंगटी–लामोसाँघु प्रसारण लाइनको ४० प्रतिशत काम पूरा भएको प्राधिकरणको दाबी छ । दोलखाको सिंगटीदेखि सिन्धुपाल्चोकको लामोसाँघु (४० किलोमिटर) सम्म १ सय २५ वटा टावर निर्माण गरिनेछ । टावर ठड्याउन ४० वटा फाउन्डेसन तयार भएको आयोजना प्रमुख राजन ढुङ्गेलले बताए । बाँकी टावरको फाउन्डेसन असारसम्म सकिने र तार तान्ने काम एक वर्षमा पूरा हुने बताए । उनका अनुसार सिंगटी र लामोसाँघुमा २ सबस्टेसन निर्माण हुनेछन् । आयोजना प्रमुख ढुङ्गेलले सामान आयातमा भन्सारको समस्याले पनि काममा ढिलाइ भइरहेको बताए । भारतीय कम्पनी अरावलीले काम नगरेपछि खानी खोला १ का प्रवद्र्धकहरू भारतमै पुगेर आफैं काम गर्ने गरी २०७१ सालमै सम्झौता गरेका हुन् । उनीहरूले फाउन्डेसनको काम सुरु गरे लगत्तै २०७२ वैशाखमा भूकम्प गयो । त्यसपछिको नाकाबन्दीले एक वर्ष काम ठप्प भयो । पुनः काम सुचारु गर्ने बेला थपिएको म्याद सकियो । लामो कसरतपछि थपिएको म्याद पनि सकिन लागेको हो । सिंगटीमा नयाँ सबस्टेसन निर्माण गर्ने र विद्यमान लामोसाँघु सबस्टेसनको स्तरोन्नति गर्ने प्राधिकरणले ढुंगेलले जानकारी दिए । प्रसारण लाइनको कूल लागत ४२ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । प्रसारण लाइन तयार भएपछि दोलखामा निर्माणाधीन ४० मेगावाटको खानीखोला–१, ३० मेगावाटको खानी खोला, २५ मेगावाटको सिंगटी, ११ मेगावाटको तल्लो खारेखोला, २४.१ मेगावाटको खारे खोला, १० मेगावाटको सिप्रिङ खोलाको विद्युत राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिनेछ । प्रसारण लाइन नभएको निहुँ बनाउँदै निर्माणाधीन आयोजनाहरूको काम पनि सुस्त छ । त्यसैगरी आयोजनाको लागतसमेत बढिरहेको प्रवद्र्धकहरू बताउँछन् ।
धुलाम्य सडकले स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर
सडक निर्माणको क्रममा धुलोको मात्रा अत्यधिक हुँदा गुल्मीमा प्रदूषणको दर बढेको छ । धुलो व्यवस्थापनको लागि चासो नदिँदा गुल्मीवासीको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर परिरहेको छ । हुनत हिउँद महिनामा धुलाम्य सडक नहुने कुरै भएन तर पनि जताततै डोजर चलाइएका कारण यस बर्ष सडकहरू अत्याधिक धुलाम्य भएका छन ।
धेरै सन्तान जन्माउनेलाई प्रोत्साहन भत्ता !
नेपालमा ‘दुईमात्र सन्तान, ईश्वरको बरदान’ भन्ने मान्यता स्थापित छ । राज्यले यसैअनुसार नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्दै आएको पनि छ । तर, पूर्वी नेपालको इलाम नगरपालिका भने जनसंख्या बढाउन प्रोत्साहन भत्तासहित अगाडि बढेको छ । नगरपालिकाको जनसंख्या वृद्धिको उद्देश्य भने फरक छ– उपमहानगरपालिकामा स्तरोन्नति गर्नु ।
अलैंचीको बजार खोज्दै व्यवसायी
प्रदेश नं. १ का किसानको प्रमुख आम्दानीको स्रोतका रुपमा रहेको नगदेवाली अलैंची बिक्रीमा समस्या हुन थालेपछि नयाँ बजार खोज्न सुरु भएको छ । अलैंचीको व्यापारमा सहजता ल्याउन अलैंची कृषक र व्यवसायी छलफलमा जुटेका छन् ।
गरिबी निवारण कोषबाट ३४ हजार परिवार लाभान्वित
गरिबी निवारण कोषले सिन्धुलीका गरिब तथा विपन्न समुदायका लागि ७७ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ । आयआर्जन सम्बन्धी परियोजना र भौतिक पूर्वाधारका योजना मार्फत हालसम्म ७७ करोड ३८ लाख ४ हजार ५२० रुपैयाँ रकम लगानी गरेको कोषले जनाएको छ । यसमा आयआर्जन सम्बन्धी परियोजनामा ५१ करोड ७२ लाख १० हजार ९९६ रुपैयाँ घुम्ती कोषको रूपमा लगानी भएको र भौतिक परियोजना निर्माणका लागि २५ करोड ६५ लाख ९३ हजार ५२३ रुपैयाँ लगानी भएको कोषले जनाएको छ ।
बल्दैनन् सौर्य बत्ती
इलाम बजार क्षेत्रभित्र जडान गरिएका सोलार (सडक) बत्तीहरू बल्न छोडेका छन् । सौर्य बत्ती जडान गरिएको छ महिना पनि नबित्दै रातको समयमा बत्ती बल्न छाडेको हो ।
नेपालगन्जका भित्री सडक निर्माण सुरु
नेपालगन्जका भित्री सडक र नालाहरूको निर्माण कार्य सुरु गरिएको छ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका भित्रका सडक तथा ढल÷नाला निर्माणको ठेक्का पाएको कालिका जेडीटएसजे जेभीले सम्झौता लगत्तै काम समेत अगाडि बढाएको छ । यसअघि राँझा–कोहलपुर सडक खण्ड निर्माण गरेको कालिकाले निर्धारित समय अगावै काम सकेकाले अब पनि समयमै काम पुरा हुनेमा उपमहानगरपालिका विश्वस्त रहेको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ ।
घोराहीमा वैकल्पिक सडक निर्माण
जिल्लामा पछिल्लो समय बढ्दै गएको सवारी चाप मध्यनजर राखेर वैकल्पिक सडक (बाइपास) निर्माण गर्न थालिएको छ । घोराही उपमहानगरपालिकाले वैकल्पिक सडक निर्माण गर्ने थालेको जनाएको छ । उपमहानगरपालिकाले पूर्वमा कुइरेपानीदेखि पश्चिम सर्रासम्म पुग्नका लागि वैकल्पिक सडक निर्माण गर्न थालेको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ । निर्माण गर्न थालिएको वैकल्पिक मार्ग करिब ८ किलोमिटर रहेको छ भने वाटो १५ मिटरको निर्माण हुने उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ ।
आइतवार, फाल्गुन २७, २०७४
मुख्यमन्त्री पौडेल कर्मचारीसँग आक्रोशित
प्रदेश तीनका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेशस तहमा खटाएका कर्मचारीले अटेर गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । हेटौंडामा तीन वटा उद्योगी व्यवसायीको संगठनले संयुक्त रुपमा गरेको स्वागत तथा सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै पौडेलले कर्मचारीले प्रदेश सरकारको गतिमा काम गर्न नचाहेको भन्दै पौडेलले नियम कानुन बनाएर निर्ममताका साथ निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आएको बताए ।
स्थानीय सरकारका गतिविधि अद्यावधिक भएनन्
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले लाखौं रुपैंया खर्च गरेर बनाएका जिल्लाका स्थानीय तहका वेबसाइटहरू अहिले प्रयोगविहिन भएका छन् । जिल्लाका ८ वटा गाउँपालिका र २ नगरपालिकाका बेभसाइटहरू बनाएर नियमित अपडेट नहुँदा राज्यको लगानी त्यसै खेर गएको छ । जिल्लाका रामपुर, तानसेननगरपालिका, निस्दी, पूर्वखोला, रम्भा, माथागढी,तिनाउँ, रिब्दीकोट र रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाको अफिसियल वेबसाइटमा दैनिक सूचना तथा जानकारीहरू अपडेट नहुँदा प्रयोग विहिन जस्तै बनेका हुन् ।
शुक्रवार, फाल्गुन २५, २०७४
उन्तति परियोजनाका सडक अधुरा
उन्नति परियोजनाको लगानीमा निर्माण भइरहेको ग्रामीण सडकहरू ठेकेदारको लापरबाहीका कारण लथालिंग भएको छ । जिल्लाको विभिन्न क्षेत्र गरी नौवटा सडक निर्माणका लागि करिब ५० करोड बजेट स्टिमेट गरिए पनि उद्देस्यअनुसारको काममात्र होइन बजेटसमेत खर्च हुन नसकेको उन्तति परियोजनाका कृषि व्यवसाय विज्ञ रमेश भण्डारीले बताए ।
तेह्रथुमको वसन्तपुरमा चोरलुङ पार्क निर्माण सुरु
स्थानीय तहको निर्वाचनपछि जनप्रतिनिधिहरू विकासे काममा व्यस्त छन् । भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, सामाजिक तथा प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालनमा जनप्रतिनिधिलाई भ्याइनभ्याई छ । सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा आएको महसुस गराउन जनप्रतिनियिधहरू नयाँनयाँ योजना र कार्यक्रमको डिजाइनमा समय खर्चिरहेका छन् । गाउँ तथा नगरलाई कस्तो बनाउने भन्ने जिम्मेवारी पाएपछि धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा जुटेर यसको संरक्षण संवद्र्धनमा समेत लागिपरेका छन् ।